Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy azo ihodivirana ny fitsinjaram-pahefana” - ewa.mg
News - Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy azo ihodivirana ny fitsinjaram-pahefana”
Mby aiza ny fampandrosoana ifotony. Hisy ny politikam-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana. “Tsy azo ihodivirana ny fitsinjaram-pahefana”, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian.
“Raha tiantsika ny hiasa haingana, tsy maintsy ao anatin’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana. Satria tsy ho vitan’ny fanjakana foibe ny hahita amin’ny antsipiriany ny zavatra tena ilain’ny vahoaka any amin’ny faritra rehetra.”
Izay ny anisan’ny valin-tenin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, teny Tsimbazaza, ny faran’ny herinandro teo, tamin’ireo fanontaniana sy ny tolo-kevitr’ireo solombavambahoaka ny amin’ny fampandrosoana eny ifotony tamin’ny nanolorany ny Politika ankapoben’ny fanjakana (PGE). Tsy azo ihodivirana ny hametrahana ny fitsijaram-pahefana, raha tiana ny hihazakazaka amin’ny fampandrosoana ny firenena.
“Ahoana ny hahazontsika mahita ny laharam-pahamehana any amin’ny distrika, raha tsy mahalala akory ny toerana na ny filana misy any an-toerana ny tomponandraikitra manapa-kevitra?”, hoy izy. Mila mazava ny andraikitry ny fanjakana foibe sy izay apetraka eny anivon’ny distrika, ny kaominina, ny fokontany.
Hivoaka ny politika momba ny fitsinjaram-pahefana
Ny solontenan’ny vahoaka no handany ny lalàna satria lalàna ny politika momba ny fitsinjaram-pahefana. Hoentina ato anatin’ny fotoana fohy ny volavolan-dalàna amin’izany. Raha ny tetiandro eritreretin’ny governemanta, tsy mihoatra ny roa volana izay politikam-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana izay.
Roa taona ihany ny nofaritana amin’ny PGE fa miankina amin’ny tetibolam-panjakana ny fanatanterahana azy. Efa nahitsy ny tetibola 2019 ary eo am-pandrafetana ny volavolana tetibolam-panjakana 2020 izao ny fitondram-panjakana. Izay ny anton’ny hoe izay hatao ao anatin’izay fe-potoana izay no nentina fa ny Plan émergence Madagascar (PEM) no hahitana ny antsipiriany.
Noho ny antony teknika, tsy natao ny antsipiriany maro amin’ny PGE: ny fanajariana lemaka, ohatra, ny fametrahana televiziona… Fitarafana ankapobeny izay hatao no nohazavain’ny praiminisitra, araka ny nambarany. Tsy misy toerana tsy hanaovana fampandrosoana amin’ny PGE. Ny fandaminana ny asa no mila arindra.
1 miliara Ar ny omena ny isam-paritra sy ny fampitaovana. Tokony handeha tokoa amin’ny filana sy ny laharam-pahamehana isam-paritra ny fampiasana izany. Ho afa-kanapa-kevitra ny tomponandraikitra amin’ny faritra, ary manana fitaovana amin’ny fanamboarana fotodrafatrasa, ary mandroso amin’ny fanatanterahana ny asa.
L’article Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy azo ihodivirana ny fitsinjaram-pahefana” a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 19/08/2019
Nidina ny firongatry ny valanaretina: iray lavon’ny Covid-19 ary 43 ny tranga vaovao ho an’Analamanga
Nidina indray ny fihanaky ny valanaretina eto amintsika, raha ny tatitry ny CCO, omaly. Miisa 59 ireo nifindran’ny valanaretina ka avy eto Analamanga ny 43 amin’izany. Nisy fidinana izany raha mitaha amin’ireo tranga teo aloha rehetra.Ho an’ny any Amoron’i Mania, miisa 11 raha roa ny any Diana. Iray avy kosa ny any Betsiboka sy ny any Atsimo Andrefana ary ny any amin’ny faritra Menabe.Ankoatra izany, miisa 179 ireo sitrana androany ka maro anisa amin’izany ny eto Analamanga, ahitana 152.Na izany aza, nisy iray lavon’ny Coronavirus ka avy eto Analamanga izy io. Tafakatra 171 izany ireo matin’ny valanaretina raha 90 kosa ireo marary mafy.Miisa 52 657 ny fitiliana PCR vita raha miisa 4 540 kosa ny fitiliana vita eo anivon’ny GenExpert.Mahatratra 13 886 ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty raha 12 603 kosa ny isan’ireo sitrana. Miisa 1 112 sisa ireo mbola manaraka fitsaboana.Synèse R.L’article Nidina ny firongatry ny valanaretina: iray lavon’ny Covid-19 ary 43 ny tranga vaovao ho an’Analamanga a été récupéré chez Newsmada.
Fandrobana teny Andohatapenaka :: Mpanendaka mpitondra sabatra nogadraina eny Tsiafahy
Notazomina vonjimaika eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ny tovolahy iray, valo ambin’ny folo taona, noho ny fanendahana sy fandrobana olona eny amin’iny faritra Andohatapenaka iny. Mitondra antsy lava io tovolahy io rehefa manao ny asa ratsiny. Fantatra fa efa maro ny olona lasibatrany. Henon’ny polisy ny fisiana tovolahy mitondra sabatra maranitra mandehandeha sy mivezivezy ary manendaka eny Andohatapenaka sy ny manodidina. Nofantarina ny momba­momba azy rehetra talohan’ny nisamborana azy, tamin’ny herinandro lasa teo. Voamarina fa efa maro ny olona norobainy ary efa betsaka ihany koa ny fitoriana momba azy voarain’ny polisy ao amin’ny kaomisaria eny amin’ny 67 Ha. Telo andro taorian’ny famotorana no nitondrana azy teny amin’ny Fampanoavana, ka izao niafara tamin’ny famonjana vonjimaika izao. L’article Fandrobana teny Andohatapenaka :: Mpanendaka mpitondra sabatra nogadraina eny Tsiafahy est apparu en premier sur AoRaha.
Kandidà loholona MMM, Rakotondrainibe Michel: “Misy minisitra sy governora tsy manara-dalàna”
Nitondra ny heviny amin’izao fiatrehana ny fifidianana loholona izao ny kandidà lohalisitra avy amin’ny antoko Malagasy miara-miainga, eto amin’ny faritanin’Antananarivo, Rakotondrainibe Michel. Nohitsiny fa miseholany ny fihoaram-pefy.Taratra (+) : Aiza ho aiza ianao sy ny lisitra tarihinao amin’izao fampielezan-kevitra izao ?Rakotondrainibe Michel (-): Mizotra tsara ny anay. Miezaka mandresy lahatra ireo mpifidy vaventy an-kitsimpo sy am-pahamarinana ny tenanay. Mahaliana ny mifampitafa, mifanakalo hevitra amin’ireo mpifidy vaventy ireo. Betsaka ny hevitra sy ny fomba fijery iraisanay na inona na inona ny ankolafiny niaviany. Tena miandry anay loholona izy ireny ary maneho hatrany ny fahavonanay izahay hiaro ireny kaominina ireny. Hiray fo sy hiray aina amin’ny tompon’andraikitry ny kaominina rehetra. Renay koa ny maharary ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny kaominina, indrindra ny momba ny fifampitondrana amin’ny tompon’andraikitra sasantsasany ao anatin’ny fitondrana. Manamafy ny fihevitray hoe tsy maintsy apetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Harefo foana ny kaominina raha hiandry ny fanjakana foibe foana fa tsy maintsy omena ny tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina ireo ny fahefana sy ny ho enti-manana hanatanterahany ny vina nifidianan’ny vahoaka azy ireny. Am-pirahalahiana sy ao anatin’ny fifanajana tanteraka no anaovanay ny fampielezan-kevitra satria izany no anomezana hasina ny olom-boafidy. Tsy mandrahona izahay ary tsy mitratrevatreva.(-) : Misy ve izany mpifaninana aminareo heverinareo fa mandrahona sy tsy mandeha am-pahamarinana ?(+) Gaga izahay amin’ny trangan-javatra samihafa miseho. Mampihomehy sady mampalahelo nefa tsy azo ekena.Ohatra iray mibaribary ny tamin’ny zoma 20 novambra teo tao amin’ny faritra Vakinankaritra tamina toerana atao hoe Dian-tana. Nisy tompon’andraikitry ny fanjakana : minisitra miaraka amina governora namory mpifidy vaventy ary tena nanao fampielezan-kevitra mampifidy ny antsoiny hoe « kandidàn’ny fanjakana». Vavolombelon’izany seho izany ireo mpifidy vaventy maro, na avy amin’ ny antokonay, na ny IRD, na ny Tim na ny mahaleo tena. Tsy navela niditra ao amin’ilay toerana miaraka amin’ny findainy ireo olona ireo fa tsy maintsy napetraka teo am-pidirana ny telefaonin’ny tsirairay. Natahoran-dry zareo angamba sao maka sary na maka feo.Manoloana izany, tsy manara-dalàna ny tompon’andraikitra ambony manao fampielezan-kevitra izany. Zoma io tranga io ary efa nanomboka tamin’ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra. Nolazain’izy ireo koa fa kandidàm- panjakana ny lisitra mifaninana aminay. Fomba fanao efa lany andro izany amin’izao taona 2020 izao. Fomban’ny tany tsy demokratika izany hoe kandidàm-panjakana izany. Mbola ho amin’izany ihany ve isika ?Anisan’ny fepetra napetraky ny Ceni « ny tsy fiandanian’ny fitondram-panjakana sy ny tsy fitanilan’ny sampan- draharaham panjakana ». Tetika hitazonana ny toerany angamba ireny nataon’izy ireo ireny. Tsy azo itokisana, tsy matahotra ny mivadibadika izy ireny. Manaratsy tarehy ny fitondrana sy ny mpanao politika ankapobeny anefa izany ary hifototra any aminy ihany satria olon-kendry ny mpifidy vaventy. Tsy ho voasarika amin’ny tahaka izany ary mety manafintohina azy mihitsy aza ireny.Samy manana ny fomba fiadiny fa tsy ekenay kosa ny fandikan-dalàna samihafa mety mbola hitranga ary hanairanay hatrany ny rehetra . Tsy mendrika ireny fomba amam -panao ireny intsony ity firenena ity.Nangonin’i Synèse R.L’article Kandidà loholona MMM, Rakotondrainibe Michel: “Misy minisitra sy governora tsy manara-dalàna” a été récupéré chez Newsmada.
Satan’ny fanoherana: mitaky ny didy fampiharana ny RMDM
Tsy manaiky fandrirarirana. “Efa tapaky ny fivorianay, ny herinandro teo ny hijoroan’ny mpanohitra sy ny fampivondronan-kery. Tsy hanaiky ny tsy fanarahan-dalàna izahay. Efa voalazan’ny lalàmpanorenana ny satan’ny mpanohitra ka takinay ny didy fampiharana izany”, hoy ny filohan’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia (RMDM), Ravalomanana Marc, tetsy Anosy, omaly. Nanteriny fa samy manana ny fomba fiasany ireo antoko politika maromaro mivondrona eo anivon’io vovonana io, saingy natambatry ny fitiavana ny tanindrazana. Nohitsin’izy ireo fa tsy an’ny mpitondra sy ny mpitantana irery i Madagasiraka sy ny fampandrosoana izany. Anisan’ny namolavola sy nampandany an’io lalàmpanorenana io ny mpitondra ankehitriny, araka ny nambarany ary efa nanaiky sy nanaja izany izy ireo. “Anisan’ny nahazo vato be indrindra tamin’ny fifidianana teo izahay…Laharana faharoa taorian’ny mpitondra” hoy ihany izy. Nohamafisin’ny depiote Tim, Rabenirina Mamy fa tsy mitombina ny hametrahana mpanohitra ho an’ny eny anivon’ny Antenimiera. “Fanoherana amin’ny fitantanana ny firenena ankapobeny, araka ny voalazan’ny lalàna ihany ny anay. Tsy handinika io tolo-dalàna entin-dry zareo io izahay satria tsy mitombina”, hoy izy.Synèse R. L’article Satan’ny fanoherana: mitaky ny didy fampiharana ny RMDM a été récupéré chez Newsmada.
STARTIMES: Misokatra ny botika fahadimy ao Tanambao III Toamasina
Chaînes vaovao. Tsy mikely soroka ny Startimes mikaroka ny fomba rehetra ahafam-po ny mpanjifa sy hamporisihana ireo mbola tsy mampiasa ny televiziona nomerika ny Startimes. Vao herinandro lasa izay no niditra tao amin’ny bouquet Startimes ny televiziona ofisialy ny Manchester United (MUTV). Manomboka amin’ny 10 martsa 2021 dia ho hita ao amin’ny Startimes M6 Music sy ny RFM TV. Manomboka amin’ny bouquet Basic 22.000 Ariary dia afaka manaraka ireo chaînes kalaza momba ny mozika ireo. Ankoatra izany, “faly mampahafantatra ny rehetra ny Startimes fa hisokatra ny botika fahadimy ao Tanambao III Toamasina. Izany rehetra izany no natao dia hanatanterahana ny vinan’ny Startimes, ny ahafahan’ny tokantrano tsirairay hisitraka televiziona nomerika”, hoy Zafera Joyce, tomponandraikitry ny seraseran’ny Startimes eto Madagasikara. Nambarany ihany koa fa efa manomana ny fandefasana ny Euro 2020, hanomboka amin’ny 11 jona 2021 ny Startimes. Ankoatra ny fanohanana ny tontolon’ny fanatanjahantena dia tsy manadino ireo vehivavy tia manaraka “série” ihany koa ity orinasa ity satria vao tamin’ny voalohany martsa 2021 teo dia nitombo ny “série” azo arahina amin’ny chaîne Novela F plus satria niampy ny “série” vaovao “Belles étrangère”. Nohamafisin’i Zafera Joyce fa mbola mitohy ny fihenam-bidy amin’ireo kit Startimes noho ny fankalazana ny fahadimy taonan’ny orinasa. 50.000 Ariary ny kit terrestre, efa ao anatin’ny décodeur, abonnement iray volana miampy antenne râteau sy câble 15 metatra. Ho an’ny Kit satellite kosa dia 60 000 Ariary ny vidiny, efa ao anatin’ny « kits » rehetra miaraka amin’ny abonnement iray volana ary maimaimpoana ny fametahana azy. Ho fanampin’izany, azo jifaina amin’ny sarany 500 000 Ariary ny vata fahitalavitra nomerika 32’’. Nidina ho 900.000 Ariary ny 43’’. Ra-Nirina Cet article STARTIMES: Misokatra ny botika fahadimy ao Tanambao III Toamasina est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article STARTIMES: Misokatra ny botika fahadimy ao Tanambao III Toamasina a été récupéré chez Délire Madagascar.
Nosy Maorisy: lasa miloko mainty ny ranomasina
Ny 25 jolay 2020, tavela manamorona ny morontsiraky ny Nosy Maorisy ny sambo japoney lehibe iray, i Wakashio, mpitondra solika. Hatramin’izay ka hatramin’izao, vaky tsikelikely io sambo io, ary mety hisaraka roa mihitsy. Araka izany, raraka an-dranomasina avokoa ireo gazoala 200 t sy menaka mavesatra 3 800 t nentiny, lasa loza mandoto ny tontolo an-dranomasina, mamono ny zavaboahary rehetra.Miantso vonjy ny fanjakana maorisianina ka ny Frantsay ao La Réunion no tonga voalohany. Nanomboka ny 8 aogositrateo, nitondra fitaovana samihafa hanadiovana ny ranomasina. « Tsy maintsy vonjena ireo zavaboahary anaty ranomasina, tsy azo atao ambanin-javatra izany », hoy ny filoha frantsay, i Emmanuel Macron, raha namaly ny antson’ny Praiminisitra maorisianina, Pravind Jugnauth.Tsy Nosy Maorisy irery no iharan’izao fahavoazana izao fa mety hihanaka amin’ny fari-dranomasina manodidina raha tsy vita haingana ny fanadiovana. Efa miitatra manamorona ny morontsiraka ny solika entin’ny rivotra, araka ny sary ampitain’ny zanabolana. Maro ihany koa ireo tsara sitrapo tonga manolo-tanana manadio ny ranomasina. R.MathieuL’article Nosy Maorisy: lasa miloko mainty ny ranomasina a été récupéré chez Newsmada.
Avotra ihany ny ain’ilay lehilahy, na dia naratra mafy noho ny tifitra intelo (teo amin’ny sorony sy ny tendany, ary teo amin’ny lamosiny) aza izy. Lasan’ireo jiolahy kosa ny volabe 30 tapitrisa Ar. avy nalainy tao amin’ny banky.Nitrangana fanafihan-jiolahy nitam-piadiana mahery vaika indray tao Toliara, omaly antoandro teo amin’ny sampanana eo amin’ny biraon’ny hetra Toliara. Mpitambolan’ny orinasa Copefrito avy naka vola tao amin’ny banky iray ao an-toerana no notafihin’ny jiolahy teo amin’io toerana io. Vola saika entina hanangonam-bokatra fanaon’ny orinasa no lasan’ny jiolahy tampoka tao anatin’ny fotoana fohy. Araka ny fitantaran’ireo olona nanatri-maso, jiolahy roa no nanakana ny posy nitondra ity mpitambola ity ka tsy nihambahamba nitifitra azy intelo. Vokany, voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ary ny lamosiny ilay mpitam-bola. Lasan’ireo jiolahy avy hatrany ny kitapo nisy ilay vola 30 tapitrisa Ar ka nandositra nihazo ny avenue Monja Jaona ry zalahy. Fotoana fohy taorian’ny fanafihana, tonga haingana teny an-toerana ny polisy misahana ny ady heloka bevava nanao ny fanadihadiana rehetra.Anaovan’ny polisy fanadihadiana ilay mpitondra posy…Nahitana vodim-bala ana mpitandro filaminana teny an-toerana, nandritra ny fitsirihana nataon’ny polisy. Hatreto aloha, tsy mbola fantatra mazava ny tobi-miaramila nivoahan’ity fitaovam-piadiana nentina nanafihana ity. Nanaovana fanadihadiana any amin’ny polisy ilay mpitondra posy. Ilay naratra kosa nentina notsaboina ao amin’ny Clinique Saint Paul ao Andaboly. Nambaran’ny mpitsabo fa tsy nahavoakasika ny taovany ny bala ka tsy misy atahorana ny ainy, saingy mbola manaraka fitsaboana kosa izy. Tsy mbola hita kosa ireo nahavanon-doza tamin’ity fanafihana ity. Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana ilay mpitarika posy, izay marihina fa posin’ny orinasa ihany ity nentin’ilay mpitam-bola nakana vola tany amin’ny banky. Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy, araka izany, no hahafantarana ny marina rehetra momba ity fanafihana ity. Matetika ahitana trangana fanafihan-jiolahy ao an-tampon-tanànan’i Toliara na eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana, tsy kely lalana kosa ny ratsy.CMS sy J.CL’article Voaroban’ny jiolahy ny vola 30 tapitrisa Ar: voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ilay mpitam-bolana orinasa a été récupéré chez Newsmada.
Fandratrana :: Nogadraina ilay tovolahy nitoraka polisy
Voatazona am-ponja vonjimaika, eny Tsiafahy, ny lehilahy iray, 22 taona, tao­rian’ny nitondrana azy teny amin’ny Fampanoavana, omaly. Nandratra polisy iray nandritra ny fotoana nanenjehana azy teny Ambodihady Ambohimanarina, tamin’ny alin’ny talata lasa teo, io lehilahy io. Niara-nidina teny Anosisoa Ambodihady ny polisy avy eny amin’ny Kao­misaria Ambohimanarina sy ny Hery vonjitaitran’ny polisy (Fip) rehefa naharay antso filazana amin’ny fisiana lehilahy iray mikasi-tanana ny rafo­zany. Nifanenjehan’ny polisy izy. «Nitoraka biriky sady nanompa an’ireo mpitandro filaminana ilay lehilahy, nandritra ny nanjehana azy. Voatoraka teo amin’ny lohany ny polisy iray ka naratra mafy sy nentina notsaboina tany amin’ny hopitaly. Tafaporitsaka kosa ilay nenjehana», araka ny fanazavan’ny polisy. Notratrarina tao an-tranony, teny Ambodihady, ilay voarohirohy, ny ampitso ary nalefa teny amin’ny Fampa­noavana, ka izao nidoboka eny Tsiafahy izao. L’article Fandratrana :: Nogadraina ilay tovolahy nitoraka polisy est apparu en premier sur AoRaha.
Spirity, Samar, Egraygore: lany tanteraka ny tapakila fidirana
Fahombiazana tanteraka ny seho… Nafana ny hetsika niarahan’ireo mpivoy mozika rock tetsy amin’ny Au point d’exclamation, lounge bar Analakely, ny alahady 25 jolay lasa teo, nanomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Naneho ny talentany tamin’izany ny tarika Spirity, i Samar, i Egraygore. Novazoina tao avokoa ireo hira anisan’ny nanamarika ny tarika tsirairay avy. Nampitondraina ny “Deathrash” ny lohatenin’ny fampisehoana tamin’ity faran’ny herinandro ity, izay efa ela ihany ny nokasaina hoentina an-tsehatra fa izao vao tanteraka.Anisan’ny novazoina tao ireo hiran’ny tarika Spirity toy ny “Barbare”, ny “Fandrosoana”, ny “Fahatsaram-panahy”… Ankoatra izay, hamoaka ilay rakikira DVD “Always Rock” izy ireo amin’ity taona ity, araka ny nambaran’ny tarika. Nahafa-po ny mpanatrika ny seho satria nientanentana avokoa ny mpankafy ny tarika niaka-tsehatra.Narilala L’article Spirity, Samar, Egraygore: lany tanteraka ny tapakila fidirana a été récupéré chez Newsmada.
Fifofoana ny ain’ny filoha: nilaza ho tsy niketrika ny “Apollo 21” ny Madagascar Oil
Mety tsy ho anisan’ny mpiray tendro ? Nanambara tamin’ny mpanao gazety, omaly, ny tale jeneralin’ny orinasa Madagascar Oil fa tsy tokony ho voasaringotra amin’ny fikasana hamono ny filoham-pirenena na hanongam-panjakana na ilay hetsika antsoina hoe « Apollo 21 ».Niaiky sy nanamafy ny tale jeneralin’ity orinasa mitrandraka solika eto amintsika ity, i Russell Kelly fa naharay « mail » tokoa, nalefan’ilay teratany malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay, anisan’ny ahina ho tafiditra amin’izao raharaha izao. Voalaza fa mangataka vola mitentina 10 tapitrisa euros hanozongozonana ny fanjakana izy io. « Tena nahatohina anay io voalaza io ka tsy namaly izany « mail » izany ny eo anivon’ny fitantanana ny Benchmark Group, anisan’ny manana petra-bola be indrindra eto anivon’ny Madagascar Oil », hoy izy.Manameloka ny fanonganam-panjakanaManoloana izany, nanambara izy ireo, ny Madagascar Oil sy ny Benchmark Group fa manameloka tanteraka ny hetsika rehetra mitondra ho any amin’ny fanakorontanam-panjakana. « Eo koa ny fanitsakitsahana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia. Maneho hatrany ny fanohananay ny fanjakana malagasy sy ny fandraisanay anjara amin’ny fampiroboroboana ny toekarena eto. Manaja tanteraka ny lalàna sy ny fanjakana eto izahay », hoy ihany izy ireo.Fikarohana ireo « commandos »Tsiahivina fa anisan’ireo efa nohadihadin’ny eo anivon’ny polisy misahana ny ady heloka bevava (BC), Anosy ity tale jeneralin’ny Madagascar Oil ity, ny asabotsy teo. Hatreto aloha izany, tsy anisan’ireo ahina ho ao ambadiky ny fifofoana ny ain’ny filoha izy ireo. Mbola mitohy rahateo ny fanadihadiana momba ity raharaha ity.Etsy an-daniny, mandeha koa ny fikarohan’ny mpitandro filaminana, ahitana ny zandary sy ny polisy ireo andiana « commandos », miisa dimy efa eto an-toerana amin’ireo 15 voalaza fa niketrika izany fanonganam-panjakana izany. Eo koa ny fikarohana ireo manamboninahitra malagasy, ahina ho voasaringotra amin’ity hetsika « Apollo 21 » ity. Andrasana ny ho tohiny.Synèse R. L’article Fifofoana ny ain’ny filoha: nilaza ho tsy niketrika ny “Apollo 21” ny Madagascar Oil a été récupéré chez Newsmada.
Nontontosaina tany Boeny, omaly, ny famaranana ny fampiofanana ny rindram-baiko ho entina hanatsarana sy hanara-maso ny mpiasam-panajakana “Augure” . Niara-niasa tamin’izany ny ministeran’ny Toekarena sy ny vola ary ny ministeran’ny Asam-panjakana. Efa samy nisitraka izany fampiofanana izany avokoa ny faritra 22 ka nofantenana tamin’izany ireo mikirakira ny lafiny maha olona eo amin’ny sehatry ny asam-panjakana. 45% amin’ny fidiram-bola eo amin’ny lafin’ny hetra no lasa andoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana avokoa. Midika izany fa manodidina ny 5% amin’ny teti-bolam-panjakana no atokana hikarakarana ireo mpiasa ireo. Antony hanatsarana ny fitantanana ny mpiasam-panajakana izany ka nahatonga ny fidirana amin’ny fampiasana izao rindram-baiko “Augure” izao. Voarakitra ato anatin’izany avokoa na ireo miditra na ireo miala amin’ny asam-panjakana. Miezaka ny fanjakana foibe ny hanafaingana ny fampidirana ny mombamomba ireo mpiasam-panajakana rehera ao anatin’izao fanaovana ara-informatika izao. “Manomboka any amin’ny fandraisana azy ireo izany. Mandalo amin’ny fanantanterahana ny asa ary ny famaranana. Tsy misy ny mpiasam-panajakana tsy ho tafiditra amin’ity fampiasana ny tekonolojia vaovao ity intsony. Efa mamaramparana izany asa izany ny ministera roa tonta izao”, hoy ny minisitra Ranampy Gisele.Synèse R.L’article Fanatsarana ny fitantanana/ Ho hita amin’ny « Augure » avokoa ireo mpiasam-panjakana a été récupéré chez Newsmada.
Ranto Rabarisoa est un l’ancien président du comité militaire pour la défense nationale durant la transition en 2009. « Il ne faut pas sous-estimer la situation qui prévaut » quant à la sécurité du président de la République, a avancé hier le général de corps d’armée en retraite Ranto Rabarisoa. Il parle en connaissance de cause, celui qui fut un temps l’aide de camp de Didier Ratsiraka quand ce dernier était aux commandes. Selon Ranto Rabarisoa, la trahison peut prendre son origine dans l’entourage même du président de la République. A ce point, le niveau d’alerte peut virer au rouge et la menace est vraiment imminente. Dans ce cadre, « la mission ne se limite pas à la protection rapprochée du chef de l’Etat et de sa famille mais également à la collecte des renseignements » affirme t-il. Et « la protection du président de la République n’est pas l’apanage d’une seule personne » indique Ranto Rabarisoa. Recueillis par Rija R. L’article Ranto Rabarisoa : « La taupe peut être dans l’entourage du président de la République » a été récupéré chez Midi Madagasikara.
J.O – Lomano “relai 4 x 200 m” : norombahin’ny Sinoa ny medaly volamena
Lasan’ny atleta sinoa misehatra eo amin’ny taranja lomano ny medaly volamena, nandritra ny lalao famaranana “relai 4 x 200 m” vehivavy , omaly. 7 minitra 40 segondra sy 33 ampahazatony no nahavitan’i J.X Yang, i M.Tang sy i B.Li ary i Y.Zhang io halavirana io. Ampy nandrombahan’izy efa-bavy ny medaly volamena nanoloana ny mpilomano amerikanina izay nahavita 7 minitra 40 segondra sy 73 ampahazatony io fe-potoana vitan’izy ireo io. Nitana ny laharana faharoa, noho izany, ny Amerikanina ary nanaraka azy ry zareo Aostralianina. Etsy ankilany, mitovy isa ny medaly volamena azon’ny Sinoa sy ny Japoney amin’ity fifaninanana ity, amin’izao fotoana. Samy manana medaly volamena miisa 15 izy ireo, saingy manan-tombo amin’ny fitambaran’ny isa eo amin’ny medaly volafotsy sy ny alimo ry zareo Sinoa. Mitana ny laharana vonjimaika alohan’ny mpampiantrano indray noho izany ny Sinoa.Tsiferana R.L’article J.O – Lomano “relai 4 x 200 m” : norombahin’ny Sinoa ny medaly volamena a été récupéré chez Newsmada.